Vatengesi veMask uye Fekitori - China Mask Vagadziri
mulberry kurara kusakara kuseta
100% silika pijama
nyowani tsika poly bvudzi bhandi
tsika poly bvudzi bhandi
poly bvudzi bhandi
Silk Chiso Mask
Ichi chisiki kumeso chinogadzirwa kubva ku100% Mulberry silika, yakapfava uye inofema, zvakare inofarira ganda. Dhizaini ye3D yakanakira kuvhara zvese mhino nemuromo, yakawanda yakadhindwa pateni kunge echinyakare maronda, uye mavara ndeako ako mafashoni sarudzo. Main Jira: 16MM, 19MM Charmeuse machira, maviri akaturikidzana. Saizi: 25cm x 15cm sekuratidzwa kwemufananidzo. Kucheka: 3D dhizaini, inokwana zvirinani, HAZVI kuwira pasi kana uchifamba kana kutaura. Sefa Homwe: Kwete Inogadziriswa Mhuno Clip: Hongu Inogadziriswa Earloop: Hongu ...
Muchena Ruvara Silk Chiso Mask
Ichi chisiki kumeso chinogadzirwa kubva ku100% Mulberry silika, yakapfava uye inofema, zvakare inofarira ganda. Dhizaini ye3D yakanakira kuvhara zvese mhino nemuromo, yakawanda yakadhindwa pateni kunge echinyakare maronda, uye mavara ndeako ako mafashoni sarudzo. Main Jira: 16MM, 19MM Charmeuse machira, maviri akaturikidzana. Saizi: 25cm x 15cm sekuratidzwa kwemufananidzo. Kucheka: 3D dhizaini, inokwana zvirinani, HAZVI kuwira pasi kana uchifamba kana kutaura. Sefa Homwe: Kwete Inogadziriswa Mhuno Clip: Hongu Inogadziriswa Earloop: Hongu Ot ...
Chiedza Bhuruu Ruvara Silk Chiso Mask
Chiedza Pink Ruvara Silk Chiso Mask
Ichi chisiki kumeso chinogadzirwa kubva ku100% Mulberry silika, yakapfava uye inofema, zvakare inofarira ganda. Dhizaini ye3D yakanakira kuvhara zvese mhino nemuromo, yakawanda yakadhindwa pateni kunge echinyakare maronda, uye mavara ndeako ako mafashoni sarudzo. Main Jira: 16MM, 19MM Charmeuse machira, maviri akaturikidzana. Saizi: 25cm x 15cm sekuratidzwa kwemufananidzo. Kucheka: 3D dhizaini, inokwana zvirinani, HAZVI kuwira pasi kana uchifamba kana kutaura. Sefa Homwe: Kwete Inogadziriswa Mhuno Clip: Hongu Inogadziriswa Earloop: Hongu Imwe r ...
Beige Ruvara Silk Chiso Mask